Soomaaliya, 27 March 2018
Talaado 27 March 2018
Soomaaliya oo Q.M. Kaga Ashtakootay Imaaradka Carabta
Dowladda Soomaaliya, ayaa golaha ammaanka ee Q.M. u gudbiyay ashtako ka dhan ah Imaaraadka Carabta. Waxay dowladda ku eedeysay dowladda Imaaraadka oo saldhig ciidan ka sameyneysa magaalada Berbera mid xadgudub ku ah madax-bannaanida iyo shuruucda caalamiga ah.
Gabar Xildhibaan ah oo Muqdisho Lagu Dilay
Warar goor dhawayd naga soo gaadhay magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in mid ka mid ah xildhibaannada maamul goboleedka Koonfur Galbeed lagu dilay magaalada Muqdisho.
Muqdisho: Dolwadda oo Safiirka Imaaradka Su'aalo Weydiisay
Dawladda Soomaaliya ayaa shalay u yeertay safiirka Imaaraadka Carabta ee Soomaaliya, Maxamed Cuthmana Al-Xamadi, oo Muqdishu kusoo laabtay Axaddii, waxayna dawladdu sheegtay inay u gudbisay dareenkeeda ku aaddan heshiiskii dekedda Beberba.
Somaliland: Wasiirada oo Ansixiyay Miisaaniyadda 2018
Golaha wasiirada Somaliland ayaan maanta ansixiyay miisaniyadda sannadka 2018 ee xukuumada cusub ay ku howl gali doonto, taas oo dhan in ku dhow laba tiriliyan oo lacagta Somaliland ah.
Hiiraan: Shabaab iyo Ciidanka Dowladda oo Dagaallamay
Wararka ka imanaya gobolka Hiiiraan ayaa sheegaya in maanta ay dagaallo ka dhaceen degaan u dhow magaalada Beledweyne kuwaasi oo dhexmaray ciidamada dawladda iyo maleeshiyada Al-Shabab.
Dhageyso Galka Baarista: Sida Dharka Ciidamada uu ku Gaaro Shabaab
Ku soo dhawaada Galka Baarista oo ah Barnaamij dabaggal ku saabsan oo ku aaddan dhacdooyinka dhaca ee u baahan in si qoto dheer looga hadlo. Barnaamijkan oo aad VOA ka dhageysan doontaan, ayaa toddobaadkan waxa uu ku saabsan yahay sidey kooxda Shabaab ku hesho dharka ciidamada dowladda oo ay weerarada u adeegsato.
Muqdisho: Fikradaha Xagjirnimada oo Laga Dooday
Shir looga hadlayo fikirka xag-jirnimada iyo waxa keena, ayaa magaalada Muqdisho lagu qabtay, kaas oo ay ka soo qeyb galeen xubno ka tirsan dowladda Soomaaliya.
Md. Cawad: Mowshinku Wuxuu Xiriir La Leeyahay Go'aankii DP World
Guddoomiye ku xigeenka labaad ee baarlamaanka Soomaaliya, Mahad Cabdalla Cawad, ayaa sheegay in mooshinka ka dhanka ah guddoomiyaha baarlamaanka Maxamed Cismaan Jawaari inuu xiriir la leeyahay sharcigii baarlamaanku ansixiyey ee mamnuucayey shirkadda DP World.
IGAD oo War ka Soo Saartay Xaaladda Soomaaliya
Urur goboleedka IGAD ayaa Isniintan maanta ah sheegay inuu mar kale ku celinayo qaddarinta uu u hayo madaxbannaanida, xudduudaha dhulka, madax-bannaanida siyaasadeed iyo midnimada Soomaaliya, sidaasina waxaa lagu sheegay war qoraal ah oo ka soo baxay ururka IGAD.
Wareysi: Maxamed Xasan oo Fursad Waxbarasho Ka Heley Kanada
Dalka Kanada sanad walba waxaa deeq waxbarashada sare ah ka hela arday laga soo xulo dalalka Africa ee Saxaraha ka hooseeya.
Warbixin: Muranka Moshinka ee Hey'adaha Dowladda
Wararkii ugu dambeeyay ee Muranka siyaasadeed ee weli ka dhex oogan hey’adaha ugu sareeya ee dowladda Federalka Somalia.
Warbixin: Xaaladda Magaalada Balcad
Magaalada Balcad ee Gobolka Shabeelaha Dhexe waxey ka mid tahay magaalooyinka ku caan baxay tacabka beeraha.